Kolontsaina – fanilo
KMTM: Any Fianarantsoa indray ny fankalazana ny taombaovao iraisana
Taoriana��ny fanombohana��ny fankalazana ny taombaovao malagasy ny 20 septambra teo teto Antananarivo. Tapaka fa any amina��ny faritanina��i Fianarantsoa indray no hanatanterahana ny fankalazana iraisana ary ny faha-9 volana septambra 2018 ny fotoam-pankalazanaa��
Hetsika Y LATRO: Ambohipihaonana��ny filatro malagasy maoderina
Ny alina��ny zomaA� 8 desambra 2017 ho avy izao manomboka amina��ny 07 ora harivaA� eny amina��ny tokotany malalaky ny YMCA enyA� Nanisana no hanatontosana ny hetsika filatroana Y Latro, izayA�A� hifandrimbonana��ireo mpamorona malagasy miisa efatra eto amintsika toa an-dry Gaona syA� Mafoural.
Fikambanana Tandroharena: Manao antso avo ho fanavotana ny vako-pirenena
Hankalaza ny faha-5 taona nisiany amina��io taona ho avy io ny fikambanana Tandroharena na ny fikambanana��ireo mpikaroka sy mpandinika ny atao hoe Vakoka na harena na lova, izay fehezina��ny teny frantsay hoe "Patrimoine". Maro ireo hetsika efa vita na dia tsy naharaka aza ny enti-manana, hoy ireo mpikambana. Isana��ireny ny voly ananambo teny amina��ny sahana��Imaitsoanala teny Ambohimangakely, ny taona 2015, mba hamerenana ny hambom-pom-pirenena amina��ny alalana��ity voary mpitondra otrikaina maro ity.
Teatra malagasy : Ezahina averina amina��ny toerany
Nanana ny lazany sy ny taom-bolamenany ary ny toerany ny tantara an-dampihazo teto Madagasikara hatrizay, hoy ny avy eo anivona��ny minisiterana��ny Kolontsaina. Niroborobo fatratra izany talohana��ny ady lehibe faharoa ary azo lazaina ho fitaovana enti-miserasera nanehoana ny kolontsaina malagasy, fa indrindra koa, sehatra malalaka ho fanandratana ny kanto amina��ny lafiny maroloko.
Lalaon-tsaina : Tafatsangana ny Federasiona miahy ny fanorona
Kolontsaina iray mampiavaka ny Malagasy manerana izao tontolo izao ny fanorona. Marobe ireo mangetaheta ny hametrahana azy amina��ny fomba ofisialy. Tanteraka soa aman-tsara izany, satria nijoro tamina��ity taona ity ary nahazo taratasy fankatoavana avy amina��ny fanjakana ny fijoroana��ny Federasiona ara-dalA�naa��
Fikarohana : Voafidy itantana ny Akademia malagasy ny Pr Ranjeva Raymond
Nanamarika iny volana oktobra iny ny fahalaniana��ny Pr Ranjeva Raymond itantana ny Akademiam-pirenena malagasy. Nisokatra tamim-pomba ofisialy ny alakamisy 26 oktobra teo ny fe-potoam-piasana 2017-2018. Hitondra ainga vao ho ana��ity Akademiam-pirenena ity ny fahatongavany eo amina��ny toeranaa��